जीवन विकास लघुवित्तसहित सात कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च, कुनको कति ? « Nepal Bahas
प्रकाशित मिति : १४ श्रावण २०७८, बिहीबार १६:४३
१४ साउन, काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहीबार शेयरबजारमा ७ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च रहेको छ ।
यस दिन २ वाणिज्य बैंकसहित ७ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च देखिएको हो । जीवन विकास लघुवित्तसहित ७ कम्पनीको शेयरमा उच्च खरिद माग रहेको छ ।
त्यस्तै, नेशनल हाइड्रो, रिडि हाइड्रोपावर, हाइड्रोइलेक्ट्रोसीटी इन्भेष्टमेन्ट, निफ्रा, सिद्धार्थ इक्वीटी फण्ड, नबिल ब्यालेन्स फण्ड र एनएमबि पचाँसको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ । यस दिन सबैभन्दा जीवन विकास लघुवित्तको शेयरमा खरिद माग आएको छ ।
जीवन विकास लघुवित्त
जीवन विकास लघुवित्तको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा १३ लाख ७७ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा १३ लाख ७७ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा बिक्री आदेश शून्य रहेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ९८९ रुपैयाँ पुगेको छ । नेप्सेमा आजदेखि लघुवित्तको कारोबार सुरु भएको हो ।
रिडि हाइड्रोपावरको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ६५ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ६५ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा बिक्री आदेश १ हजार ४ सय कित्ताको रहेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ७२९ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेशनल हाइड्रोपावरको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ५४ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ५४ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा बिक्री आदेश १ लाख २१ हजार कित्ताको रहेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ३६७ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । बैंकको शेयरमा करिब २ लाख १ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।कम्पनीको शेयरमा करिब २ लाख १ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा बिक्री आदेश ६१ हजार कित्ता रहेको छ । यस दिन कम्पनीको प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ४८६ रुपैयाँ पुगेको छ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रोसीटी इन्भेष्टमेन्टको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । बैंकको शेयरमा २ लाख ६ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । कम्पनीको शेयरमा २ लाख ६ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा बिक्री आदेश १ लाख ९७ हजार कित्ताको रहेको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमूल्य बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ४५२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
हेरौं कुन कम्पनीको शेयर खरिद माग कति ?
सोमबारसम्म कायम लगानीकर्ताले डिप्रोक्सको लाभांश पाउने
अरुण भ्यालीको मूल्य समायोजन
सर्वसाधारणको लागि बुद्धभुमि नेपाल हाइड्रोपावरको आईपीओमा बिक्री खुल्ला
करिब ६ अर्वको आईपीओ आउदै